Gaawirada AMISOM oo qof shacab ah ku jiiray deegaanka Calamada. – Hornafrik Media Network
Kolanyo Gaadiid ah oo ay la socdeen Ciidanka Midowga Africa ee AMISOM Ayaa maanta qof shacab ah ku jiiray deegaanka Calamada ee ku yaalo duleedka Magaalada Muqdisho.
Qof Shacab ah oo taagnaa Wadada Geeskeeda ayaa lagu soo waramayaa inuu jiiray Gaari AMISOM ah, kadibna Gaarigii Labaad ee isla Kolonyadda AMISOM ayaan isna ka istaagin Muwaadinkaasi Soomaaliga ahaa ee Gaarigii Koowaad jiiray, Waxaana la xaqiijiyay in Labada Gaariba ay dul mareen Qofkaasi Shacabka ah.
“Nin ka mida Dadka Deegaanka oo Wadada Meel ka baxsan taagnaa ayeey AMISOM gaari jiirsiiyeen, kadibna Gaarigii labaad ee ku xigay ayaa isna dul maray, Waana fal ku talagal ah,” sidaasna waxaa HornAfrik u sheegay mid ka mida Dadka Deegaanka.
Banaanbax xoog leh ayaa ka dhacay deegaanka Calamadda illaa iyo Ceelasha biyaha, kaas oo ilaa hada socdo, Waxaana gabi ahaanba xiran wadada Isku Xirta Afgooye iyo Muqdisho. iyadoona Dadwayne Caraysan ay Taayiro ku gubayaan Wadada.
AMISOM ayaa Shilalka ay gaysato aan u istaagin, isla markaana ka bixin wax magdhow iyo Garowshiyo ah.
Tahriibayaal ku dhintay biyaha Mediterraneanka.